DEG DEG: Qarax lagu laayay dad shacab ahaa oo gaari saarnaa iyo wararkii ugu dambeeyay - Banaadisom
Home Wararka Maanta DEG DEG: Qarax lagu laayay dad shacab ahaa oo gaari saarnaa iyo...
DEG DEG: Qarax lagu laayay dad shacab ahaa oo gaari saarnaa iyo wararkii ugu dambeeyay
Gaani Nuuca raaxada ah oo ka safray Deegaanka Qooqaani kuna sii jeeday Magaalada Dhoobley waxaa ku qaraxday miino jidka la geliyay oo u geysatay Khasaare Dhimasho sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen saraakiil & dad kala duwan.
Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay Qaraxaas 5-ruux oo kala ah, Wadaha Gaariga, Haweeney Umul ah, Wiil ay dhashay oo jiray 2-bilood iyo labo kale oo la socotay Gaariga sida uu xaqiijiyay Guddoomiyaha Dhoobley Maxamed Xasan Uleex.
Qaraxaan oo dhacay Xalay Fiidkii, waxaana gurmad la siiyay Gaariga qaraxa loo dhigay oo ay la socdeen dadka shacabka, Maydadka 5-ta ruux ayaa la geeyay Deegaanka Dhooblay oo ay u socdeen.
Guddoomiyaha Dhoobley oo la hadlay VOA ayaa mas’uuliyadda qaraxaas dusha ka saaray Al-Shabaab, maadaama waddadaas dhowr jeer oo hore ay geliyeen qaraxyo dhimasho & dhaawac u geysatay dadka shacabka.
Ku safarka waddooyinka Gobolka Jubada Hoose waa mid adag, dhowr jeer waxaa la weeraray Gawaari ka safartay Degmooyin katirsan Gobolkaas, halka qaar kale loo dhigay miinooyin ku qarxay.
DG Jubbaland ayaa sheegtay in ay wax ka qabaneyso qaraxyada miinooyinka oo welwel badan ku beeray dadka shacabka ah ee isaga kala gudba Degmooyinka Gobolka Jubada hoose oo haatan qarka u saaran in ay joojiyaan sabab la xiriirta dhibaatada ay kala kulmayaan. 5feb0152367e8
Previous articleDEG DEG DAAWO: Aabihii dhalay Ninkii isku qarxay Gaalkacyo oo lasoo qabtay War Naxdin leh Shaaciyay
Next articleDEG DEG: Puntland oo Joojisay doorasho lagu qaban lahaa Gaalkacyo + sababta